Xaqiiq naga Dahsoonayd! – Xeernews24
Xaqiiq naga Dahsoonayd!
Diridhaba! goorma muranka galay, yaase muranka galiyay?
Diridhaba waxaan shaki ku jirin in magici ugu dambeeyay ee nidaamki Dhargiga loogu yeedhi Issana-Gurgura Awraja. Maamulka waxa si kaltana isu daba mari jiray Ciise iyo Gurgure oon ka xusi karno kuwoodi ugu dambeeyay sida; Maxamuud Jarmal, Ismaacil iyo Maxamuud Sheekh Axmad.
91ki wixi ka dambeeyay kadib marki nidaamki Dhargiga dhacay lana wareegen xukunka Ethiopia EPRDF oo ah Jabhadihi isbaahaystay oo tigreega hormuudka ka aha isla markaana u hogaaminayay masuubadi halligmay ee Meles Zenawi. Diridhaba wixi inta ka dambeeyay Maamulkeeda ma Sal dhigin ila laga gaadho 08.2006da. Haddaba maxa dhacay?
1995ki Ethiopia waxay qaadatay nidaamka Federal-ka kaaso Qoomyad kasta u ogolaaday inay iskeed isku maamusho, waxaan ka ahayn Diridhaba iyo Addis Abeba oo noqday Federal. 08.2006di waxa marki ugu horreysay taariiqda loo magacaabay Kantiba „Duqa“ Diridhaba Cabdicasiis Maxamed oo baddalay Ato Fassaha Zerihun.
Marki warka soo shaac baxay in Nin Oromo xilka la wareegayo waxa bilawday Guux iyo Cadho Somaalida ku diidan yihiin tallaabadani, Siyaasiyiin u ka mid yahay Aden Allale oo xattaa Bbc-da uga warramay, dhallinta ayaa bilaabay Abaabul iskooda, waxayna magaalada ku daadiyeen Waraaqo liddi ku ah tallaabadani, rabeena in lagu mudaaharaado. Intaas kadib si nidaamka ugu hirgasho Xil-wareejinta ayaa Ciidamada Mukhaabaraadka Xeelad-ahaan ila tiraba 3 goobood Bambooyin ku tuureen, waxana magaalada lagu soo daadshay sidi qorshaha ahaa Cidaamo „Fadnodharaash“, waxa la bilaabay haldhabaalaysiga dhallinta oo qaarkood la qabtay qaarkoodna nafohooda la carareen. Dhinaca kale Xil-wareejinta waxa taageersana isla markaana nidaamka watay Maxamed Ugaas Xassan loona aqoonsana inu mattalo Somaalida qaasatan Beesha Ciise.
Ballanti Xil-wareejinta maalin kahor ayaa waxa Diridhaba ka dhacday masiibo dabeeciya, Roobab mahiigaana kadib waxa soo rogmaday Dixda „Dooxa“ caddaadka oo kala badha magaalada kaaso ku fattahay qaybo ka mida isla markaana galaaftay nolosha boqolaal Ruux. Waxa looga dhawaaqay 3 maalmoodo Baroor-diiqa, masuubada darteed Xil-wareejinta ayaan Xaflad loo samayn, taas baddalkeed ayaa waxa lagu qabtay Hool yar oo ku yaal Counsil-ka cusub iyado goobjoog ka ahaayen Fassaha Zerihun(Tigre) oo xilka wareejinayay Cabdicasiis Maxamed (Oromo) oo xilka lagu wareejinayay, Maxamed Ugaas Xassan oo Somaalida mattalayay iyo odyo kale oo iyana Gurgure, Oromo mattalayay iyo Wariye Somaaliya.
Xilligaas wixi ka dambeeyay iyo sababtaas an so sheegnay ayaa muranka galiyay lahaanshaha Diridhaba.
Qore: Macalin Bashiir
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png 0 0 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-07-29 21:59:082018-07-29 21:59:08Xaqiiq naga Dahsoonayd!
AKHRISO: Maxay tahay Ujeedada Dahsoon oo Eritrea ay ka leedahay dhexdhexaadinta...